လူတိုင်း မမြင်ဖူးသေးတဲ့.. ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ကြီး၏ မြေအောက်တွင်းမှာရှိတဲ့ ပုံတူ ပုံစံငယ်နှင့် သမိုင်းကြောင်း – Tameelay
ဘုရား တရား သံဃာ, သမိုင်းနှင့်အထ္ထုပတ္တိများ စုစည်းမှု
ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ကြီး၏ တရုတ်တို့လက်ရာ မြေအောက်က ပုံစံငယ်…။
နေလ ဘုရားအနီးက တန်စောင်းတွင် တည်ရှိပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံ ဘုရင်က မြေရှိုးပြီး မိုးပျံနိုင်သော လူစွမ်း’မ’ကောင်း မောင်ကံဆိုတဲ့သူကို
ဓါတ်တော်တွေ ခိုးခိုင်းစဉ်တုန်းက သုံးဖူးတဲ့ မြေပုံလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တယ်။
မောင်ကံတစ်ယောက်ကတော့ ရန်ကုန်မြစ်ကြီးရဲ့  ဒီရေလှိုင်းအတက်အကျ
စွမ်းအင်တွေကို ယူကာသုံးထားတဲ့ လုံခြုံရေးစနစ်ကြီးကို မကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ရှာဘူးတဲ့…။
တရုတ်တွေများ ဟိုးးးဟိုးရှေးရှေးကတည်းက မြန်မာပြည်ကနေ
ဘာတွေများ ယူရရင်ကောင်းမလဲ အမြဲလိုလို စဉ်းစားနေခဲ့ကြပုံရတယ်။
Credit : စိုးဦးကျော်
တည်နေရာ….. ရန်ကုန်မြို့သိင်္ဂုတ္တရ ကုန်းတော်
ဉာဏ်တော်…….ဖိနပ်တော်မှ စိန်ဖူးတော်ထိ (၃၂၆) ပေ
ကျော်ကြားမှု…….အစောဆုံး စေတီတော်ကြီး (ကမ္ဘာ့အံ့ဘွယ်)
ရုက်္ခစိုးနတ်က .`အမောင်တို့ နားထောင်လော့ ကျွန်ုပ်က တခြားမဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်သည် ဟိုးဘ၀က အမောင်တို့နှင့် ဆွေမျိုးတော်စပ်ခဲ့သူများ ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည် ဟိုးရှေးဘ၀က ကောင်းမှုကောင်းကျိုးများ ပြုခဲ့သူ ဖြစ်သဖြင့် ယခုဘ၀တွင် ရုက်္ခစိုးနတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အမောင်တို့ ယခု သင်တို့ထံသို့ ရောက်ခဲ့သည်မှာ သင်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်သည် ယခင် ဘ၀ဆွေမျိုးတော်စပ်ဖူးသူ ဖြစ်သဖြင့် သင်တို့အား အကျိုးပြုရန် ဤသို့ ကိုယ်ထင်ပြရခြင်းဖြစ်သည် အမောင်တို့´ဟုပြောသည်။ ကုန်သည်ညီနောင်က `အသင်က မည်သို့ အကျိုးပြုဖို့လာသနည်း´ဟု ရုက္ခစိုးနတ်ကို မေး၏။ ထိုအခါ ရုက်္ခစိုးနတ်က`နားထောင်လော့ အမောင်တို့ ကျွန်ုပ်သင်တို့အား အကျိုးပြုသည်ဆိုသည်မှာ အခြားမဟုတ်ပါ။ ပြောရလျှင် အမောင်တို့ ရောက်ရှိနေသည့် မဇ္ဈိမဒေသတွင် သုံးလောကထွဋ်ထား ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟာ ပွင့်တော်မူပြီး လင်းလွန်းပင်ခြေရင်းမှာ သီတင်းသုံး စံတော်မူနေတာမို့ အမောင်တို့ သွားရောက် ပူဇော်လော့ တိုက်တွန်းလမ်းညွှန်လိုတယ် အမောင်တို့´ဟုဆိုလျှင် တဖုဿနှင့် ဘလ်္လိက ကုန်သည်ညီနောင်တို့ အလွန်တရာ ၀မ်းမြောက်ကြည်နူးသွားကြ၏။ ချက်ခြင်းပင် “ဒါဆို ကျွန်ုပ်အား လမ်းညွှန်ပြပါ ရုက္ခစိုးနတ်” ဟုပြော၏။ “ကောင်းပြီ ၊ အမောင်တို့၊”ထို့နောက် ရုက်္ခစိုးနတ်သည် တဖုဿနှင့်
ဘလ်္လိက ကုန်သည်ညီနောင်တို့အား ဘုရားရှင် သီတင်း သုံးရာ လင်းလွန်းပင်အား လမ်းညွှန်ပြခဲ့၏။ သည်အခါ ကုန်သည် ညီနောင်တို့သည် သဒ္ဒါပီတိအပြည့်နှင့် ဘုရားရှင် သီတင်းသုံးရာ လင်းလွန်းပင်ရင်းသို့ သွားကြ၏။ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား မုန့်ကြွပ်ကြော်၊ ပျားမုန့်ထုပ် တို့နှင့် ဘုရားရှင်အား လှူဒါန်းပူဇော်ခြင်းပြု၏။
၁…ဆူးလေနတ်ကြီးထံမှ ရရှိသော ကကုဿန်မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ တောင်ဝှေးတော်
၄..တဖုဿနှင့် ဘလ္လိက ညီနောင်တို့ထံမှ ရရှိသော ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဆံတော်မြတ်(၈)ဆူအား မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃-ခုနှစ်၊ တပေါင်း လပြည့်နေ့၌ ကျောက်ဖျာအခင်းအကာများ ပြုလုပ်၍ ဌာပနာတိုက် ထည့်သွင်းတော်မူခဲ့သည်။ ထိုဆံတော်ဓာတ်တို့ကို ‘အမြိဿရ’ မည်သော မှော်ဘီနတ်ကြီးက စောင့်ရသည်ဟု မော်ဓော ရာဇာဝင်သမိုင်းနှင့် ရွှေတိဂုံသမိုင်း၊ အခြား ပညာရှိတို့ကဆိုကြသည်။ ထို့နောက် ကျောက်ဖျာတိုက်၏ အထက် ၌ ကျောက်ဖျာတင်၍ ဌာပနာတိုက်အား ပိတ်ခဲ့၏၊
ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီရွတ်ဆိုသော အလွန်အကျိုးပေးသည့် ဘုရားရှိခိုး လာဒ်တိတ်နေသူများ ၊ ဈေးရောင်းမကောင်းသူများ ၊ အကြွေးမရသူများ ၊ အကြွေးမဆပ်နိုင်သူများ ၊ ငွေကြေး အခက်အခဲဖြစ်နေသူများ ၊အကြီးအကဲနဲ့ အဆင်မပြေသူများ ၊ အလုပ်အကိုင် တို့လို တန်းလန်း ဖြစ်နေသူများ ၊ လာဒ်ရွှင်ငွေဝင်လိုသူများ အတွက်အလွန်တရာမှ လာဒ်ရွှင်စေသော …
အလှူရှင်က အရေးကြီးသလား? အလှူခံက အရေးကြီးသလား? (သီလမလုံတဲ့ဘုန်းကြီး မလှူချင်ဆိုသူများအတွက်)
မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော် ဝေဿန္တရာမင်း လက်ထက်တုန်းက ဇူဇကာပုဏ္ဏားကြီးကို သားတော်နဲ့ သမီးတော်တွေ လှူလိုက်တုန်းက ဇူဇကာပုဏ္ဏားကြီးဟာ ဘယ်သီလရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်မှာလဲ။ မိန်းမကြောက်လို့ ကလေးတွေကို အဝေးကြီးကလာပြီးတော့ တောင်းတာ။ သီလလုံးဝမရှိဘူး။ အဲဒီသီလမရှိတဲ့ ပုဏ္ဏားကို မြတ်စွာဘုရားလောင်းက သားတော် သမီးတော်တွေကို ရက်ရက်ရောရော လှူလိုက်တယ်။ အဲဒီအလှူဒါနဟာ ဇူဇကာဆိုတဲ့ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့် …